QTUM စျေး - အွန်လိုင်း QTUM ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို QTUM (QTUM)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ QTUM (QTUM) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ QTUM ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $214 056 154.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ QTUM တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
QTUM များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
QTUMQTUM သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$2.55QTUMQTUM သို့ ယူရိုEUR€2.17QTUMQTUM သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.96QTUMQTUM သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.2.33QTUMQTUM သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr23.16QTUMQTUM သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.16.15QTUMQTUM သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč57.08QTUMQTUM သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł9.57QTUMQTUM သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$3.42QTUMQTUM သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$3.57QTUMQTUM သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$57.15QTUMQTUM သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$19.8QTUMQTUM သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$13.85QTUMQTUM သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹191.68QTUMQTUM သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.428.97QTUMQTUM သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$3.51QTUMQTUM သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$3.87QTUMQTUM သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿79.76QTUMQTUM သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥17.8QTUMQTUM သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥270.67QTUMQTUM သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3039.92QTUMQTUM သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦968.32QTUMQTUM သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽188.46QTUMQTUM သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴70.65
QTUMQTUM သို့ BitcoinBTC0.000225 QTUMQTUM သို့ EthereumETH0.00695 QTUMQTUM သို့ LitecoinLTC0.0456 QTUMQTUM သို့ DigitalCashDASH0.0273 QTUMQTUM သို့ MoneroXMR0.0281 QTUMQTUM သို့ NxtNXT185.74 QTUMQTUM သို့ Ethereum ClassicETC0.377 QTUMQTUM သို့ DogecoinDOGE749 QTUMQTUM သို့ ZCashZEC0.0294 QTUMQTUM သို့ BitsharesBTS101.23 QTUMQTUM သို့ DigiByteDGB96.45 QTUMQTUM သို့ RippleXRP9 QTUMQTUM သို့ BitcoinDarkBTCD0.0894 QTUMQTUM သို့ PeerCoinPPC8.94 QTUMQTUM သို့ CraigsCoinCRAIG1182.12 QTUMQTUM သို့ BitstakeXBS110.68 QTUMQTUM သို့ PayCoinXPY45.27 QTUMQTUM သို့ ProsperCoinPRC325.65 QTUMQTUM သို့ YbCoinYBC0.0014 QTUMQTUM သို့ DarkKushDANK831.86 QTUMQTUM သို့ GiveCoinGIVE5614.54 QTUMQTUM သို့ KoboCoinKOBO611.19 QTUMQTUM သို့ DarkTokenDT2.35 QTUMQTUM သို့ CETUS CoinCETI7486.38